Kooxaha Man City iyo Chelsea oo bisha Janaayo ku dagaalamaya daafac ka dheela horyaalka Premier League – Gool FM
Kooxaha Man City iyo Chelsea oo bisha Janaayo ku dagaalamaya daafac ka dheela horyaalka Premier League
Haaruun December 10, 2019
(London) 10 Dis 2019. Kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa la soo warinayaa inay ku dagaalami doonaan bisha soo socota saxiixa daafac ka ciyaara horyaalka Premier League, sida wararku ay sheegayaan.
Kooxda uu hoggaamiyo tababare Pep Guardiola ee Man City ayaa qorsheynaysa inay bisha Janaayo u dhaqaaqaan soo xero gelinta daafaca Bournemouth ee Nathan Ake, inkastoo kooxda Chelsea ay doonayso inay dhankeeda u dhaqaaqdo saxiixiisa sidaas waxaa warinaysa Sky Sports.
Chelsea ayaa doonaysa inay dib ugu soo iibsato adduun dhan 40 milyan oo gini oo u dhiganta 52 milyan oo dollar Ake kaasoo si joogto ah ugu biiray Cherries xagaagii 2017.
Blues ayaa u muuqata mid u dhaqaaqeysa soo xero-gelinta daafacan bisha Janaayo kaddib markii laga qaaday xayiraadii ka saarnayd dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Dhinaca kale Manchester City ayaa sidoo kale ugaarsanaysa inay gacanta ku soo dhigto daafacan Ake, kaasoo ay doonayso inay kaga baxdo dhibaatada daafac, maaraama ay lumisay Vincent Kompany, halka uu ka maqan yahay Aymeric Laporte.
Kulammo ka tirsan heerka Guruubyada Champions League oo caawa la soo gabagabayn doono
Kooxda Paris Saint-Germain oo bedelka Neymar Jr ka dhex-aragta Liverpool… (Waa kee Weeraryahanka ay doonayso inay kala soo wareegto Reds?)